Indlela To Train Travel Njengoko A encane Through Europe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Indlela To Train Travel Njengoko A encane Through Europe
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/07/2020)
Ukuba a umhambi solo kwaye ungathanda ukuba ukuqeqesha ezinika njenge Nomad, ngoko endaweni eyiyo. Ukuqeqesha yenye yeendlela eziphambili ahambe lonke elaseYurophu ukuba ufuna ukuba yonke into iYurophu ukuba anikele. Makube imizi, okanye landscapes mihle yendalo u niwonwabele bonke ehamba ngololiwe.
Yintoni egqithisile, ehamba ngololiwe njenge Nomad iye a lot of nezinye iingenelo. Ufumana ukuba yonke into ngexesha lakho, kunye noololiwe ukukunika ithuba awenze kakuhle ngaphandle les. Isenokuba kancane ngezinye, kodwa akukho ntshikilelo le ndlela zokuhamba, kanti moya i into eyahlukileyo ngokupheleleyo. Ukuba ukuhamba moya, kukho uxinezeleko njalo zisilele izikhululo zeenqwelo kunye namanyathelo yokhuseleko overzealous. Yintoni egqithisile, kwezinye iimeko, uza kufumana oya kuyo ngokukhawuleza xa uthatha uloliwe!
Ngenxa yesi sizathu nezinye ezininzi, ehamba ngololiwe kwi ngokwemiqathango yakho yeyona nto ilungileyo ukuba ungakwazi ukwenza. Ukuba ufuna ukuqala le adventure omlingo ephila, eli nqaku liza kukunceda ngokukunika iingcebiso kunye iingcebiso nendlela ukuba ziyifeze.
Izinto eziphambili Cinga Xa ufuna ukuqeqesha ezinika njenge encane
Phambi kokuba uqale yakho Train Travel njenge adventure encane, kufuneka ukuba intando yokwenza oko, kwaye kufuneka ube nemali.
Ukuba ufuna ukuba ehanjiswayo train umhambi, uya kuba neengxaki xa nisebenza ndiyakuthanda okanye ikhaya lakho. Nawuphi na umsebenzi ukuba ungenza kwi laptop yakho, ungakwenza oko kuyo nayiphi na indawo.
Ukuba u funa ukuthatha ikhefu ukusuka ngokusebenza ukuya kwiholide, kuza kufuneka ukuba bachithe ngobulumko imali yakho. Into entle kukuba kukho ezinye izisombululo ukunceda.
Yazi ukuba ahambe ngetreyini, ngenxa 30days okanye ngaphezulu kwe khetha yokupasa Interrail jikelele. Kodwa amatikiti Abangatshatanga zinika ithuba lokuba ahambe enkulu yeYurophu kwi lula lakho, ngokwenza ukuba iphupha a Nomad xa. Ufumana ukuya nini kwaye ufuna apho, kwaye yiloo ndlela ingcono Unokubhala amava ahambe unique.
Nantoni na ukhetha ukuhamba yakho uloliwe, you can still wonge imali ngale ndlela.
Indlela Gcina Imali xa Wena Train Travel njenge encane
Into emnandi olu hlobo amava kukuba uya ukumimitheka ukuchitha imali encinane. ngale, sithetha ukuba xa uqeqesha ezinika njenge Nomad, uya ukufumana okungcono ukuba bahlale iihostele cheap, ukupheka yakho ukudla, kunye nokuninzi.
Ukukhetha le ndlela zehambo ziya kukongela imali.
imali kakhulu bachitha xa Train Travel njenge Nomad iya ukubhukisha igumbi. kunjalo, ukuba incwadi iihostele, ungonga eninzi imali njengoko kwaye kakhulu efikelelekayo ngaphezu iihotele unyuse namava ongcono ekhumbulekayo ngakumbi. Yintoni egqithisile, xa uhamba wedwa, uyakwazi incwadi naliphi na igumbi nabantu abaninzi kulo, okuyinto ndlela ebiza bhetele. Ke sithembe ukuba, uya kufuna oku kuba oku kuya kukunika ithuba lokuba ube kunye nabanye abahambi ezifana-nye nonke.
Kwelinye icala, ukuba uyafuna uku ukuhlangabezana bendawo, kufuneka usebenzise Couchsurfing, kuba ngale ndlela uya ukufumana ukuba bahlale balapha. Plus, kokuba kukuxelela ngakumbi umzi wabo kwaye ubonise ukuba zonke iindawo fun Kubalulekile ukutyelela.
Into elandelayo ke lutshabalalisa imali yakho, kuhle, ukudla. Uyakwazi ukugcina imali ekutyeni ngokulungiselela izidlo zakho ehostele okanye zokuhlala. iihostele Uninzi kunye zokuhlala zinika amakhitshi leyo ungasebenzisa for free. Yintoni egqithisile, enye ithuba Ihostele kukuba ukuphola nabantu nokulungiselela ezinye izidlo ukwabelana.
Cologne to Paris Uqeqesha
Ukuqeqesha ezinika njenge encane Tips
Ukuba Train Travel njenge uhlobo encane ye nguqavashe, ubehlala kwiihostele yinto uza ndimnqule njengoko ngayo ukuba abantu abafana nawe.
Ukuba Train Travel njenge uhlobo encane ye introvert, kuza kufuneka ukuba kumgudu encinane ukuba ufuna ukuvala aphume nabanye. Into elungileyo imihla emva ezimbalwa, uya bayayamkela. ekugqibeleni, uya umthande indlela ufumana ukuxhoma uphume nabanye ngeli lixa umhambi Nomad.
Akuyomfuneko ukuba ukusebenzisa umandlalo surf ukuba bahlale balapha; Ungasebenzisa kwakhona ukuyisebenzisa ukuphola nabo. Le app ungasetyenziswa ukubeka meetups kunye basekuhlaleni abathanda basemzini ukuzithwalisa ebusuku ngaphandle.
Balumkeleni ke pickpockets! Njengoko kunjalo kunye nasiphi na esinye isixeko ehlabathini, imizi yaseYurophu babe pickpockets kunye nezinye bobubi bangazama ukusebenzela inzuzo labakhenkethi. Wena kufuneka silumke, kwaye kufuneka ufunde phezulu kwi imeko ilayisenisi yevolyum ye kuba loo ndawo Sityelele. Soloko ukwenza uphando intanethi ngaphambi kokuya isixeko.
Soloko usebenzisa apps ukuba unako ukwenza ubomi bakho Nomad abahambahambayo ukhululeke ngakumbi. Ukuze ukulandelela iindleko zakho, ezininzi apps ingaba amaqabane akho best.
Khumbula ukuba ukukhanya travel. Ukuba uza kuba Nomad uloliwe ohamba, uya nje ixesha lula ekwenzeni oko kuyimfuneko. Kwiihostele wosondeza iqashiso eziluncedo ezibalulekileyo ezifana iitawuli, hairdryers kunye ezifana, ngoko akuyomfuneko ukuba eyakho. Plus, zikholisa ukuba oomatshini bokuhlamba kunye nabo bokomisa iimpahla ukuba uyakwazi ukusebenzisa i Euro enye okanye ezimbini, ngoko akuyomfuneko ukuba impahla ezininzi kakhulu kunye nawe. Ukuba ufuna ukuhamba eninzi izinto, backpacking kunokuba ukukhetha engcono.
Konke kwinto enye, njenge Nomad umdla Uloliwe yinto entle kwaye kungabi-free. Ungatyelela iindawo ezininzi lula yonke amazwe omuhle Fransi , Jemani , ElamaTaliyane, kunye nokuninzi. Plus, ufumana ukuze ubone emaphandleni elihle kwaye i ekumeni emangalisa semvelo ukuba anikele. Ayikho enye indlela zehambo ziya kukunika awayengenakuyilibala and fun.
Yenza i kakhulu Train Travel njenge encane icebo kwangaphambili Thenga I-Train Amatikiti You Need, kwaye uya kukhululwa ukuqala adventure yakho!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala nge link kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-nomad-europe/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#traveleurope europeantravel europetravel amacebiso trainjourney Tranride oololiwe traintip tips uloliwe train Travel tips zokuhamba train uhambo ngololiwe Travel traveltips